मोदी र ओलीको बिचमा पुगे पत्रकार धमला ! मोदीसंग हात मिलाउदा के भने मोदीले ? हेर्नुहोस – पुरा पढ्नुहोस्……
मोदी र ओलीको बिचमा पुगे पत्रकार धमला ! मोदीसंग हात मिलाउदा के भने मोदीले ? हेर्नुहोस
भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो भ्रमणलाई लिएर खुशी छन् । भ्रमणको दौरान ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच दुईपटक वान टु वान वार्ता भएको छ ।
वार्तामा भएका केही कुरा ओलीले आफ्ना निकट सहयोहीसग शेयर गरेका आधारमा यति बुझ्न् सकिन्छ कि मोदीले नेपालसँग विशेष सम्बन्ध राखेर अघि बढ्ने निधो गरेका छन् । अब नेपालमा स्थिर सरकार बनेको भन्दै मोदीले ओलीसग मनैदेखी सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको प्रष्ट पारेका छन । मोदीसगको वार्तापछि ओलीपनि उत्साहित देखिएका छन् । उनी उत्साहित हुनुको अर्को कारण के पनि हो भने यसपटक परम्पराको निरन्तरतामा क्रमभंग गर्न उनी सफल भएका छन् ।
पहिलोपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा छलफल र वक्तव्यमा परेन । जनमतको हिसाबले मोदीले आफुजस्तै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाइ खुसी पार्न यसपटक कति पनि कन्जुस्याइँ गरेनन् ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि त्यो खुसी र प्रसन्नता प्रकट भयो । मोदीले ओली र आफ्नो नारा अब एउटै भएको भन्नू अर्थपूर्ण छ । कुनै नया र बिबादास्पद सम्झौता नगरी ओलीले भ्रमणलाई सद्भाव बिस्तार गर्नेमा सिमित पारेका छन् ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले नेपालीहरुको मन जित्नेगरि बोलेको भ्रमण दलमा सहभागी मन्त्रीहरुले नै बताएका छन् । परराष्टमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भने,“निकै उन्नती र प्रगति भयो।” द्धिपक्षीय सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभावहरु परेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पनि मोदीले नेपाल र नेपालीहरुको मन जित्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिए । उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले पनि मोदीको सम्बोधनले आफूहरुको मन छोएको बताए ।
उता उता भारतीय नेताहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधनलाई ऐतिहाँसिक र नेपाल भारत सम्बन्धमा उनको सम्बोधन आईसब्रेक भएको बताएका छन् ।
(साभार : लालीगुराँस)
Prevप्रहरीको फन्दामा सयौँ स्थानीयमाथी आंतक मच्चाइरहेको श्याम परदेशी, लाग्यो किशोरीको यस्तो आरोप
Nextरोजगारीमा साउदी पुगेका नेपालीहरु सामान्य गल्तीमा पनि आजिवन जेल सजाए काट्न बाध्य – हेर्नुहोस आजको सिधाकुरा जनतासंग कार्यक्रमको पूर्ण भिडियो
रबि लामीछाने अमेरिका छाडी नेपाल जानु पर्ने शनसनी पूर्ण खुलाशा (भिडियो सहित)
रवी ओडले जापानमा दिए यस्तो धमाकेदार प्रस्तुति- हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
सबैलाई चकित पार्ने नेपाली रोबटको अनौठो हर्क’त देखियो , यी युवतीलाई प्रेम प्रस्ता’ब राख्दै गर्यो यस्ता कु’राहरु (भिडियो सहित)